SIDA LOO SAMEEYO BARAF BARAF AH GACMAHAAGA - MISHIINADA GAARKA AH
Qalabka barafka-is-saaridda ayaa si aad ah loogu jecel yahay dadka xagaaga iyo dadka degan baadiyaha sannado badan. Mana aha wax la yaab leh, sababtoo ah milkiilaha kasta ee dacha ayaa wajahaya dhibaatada barafka ee xilliga jiilaalka.
Dabcan, tan waxaa loo sameyn karaa gacanta, hubaysan leh majarafad, laakiin waxay qaadan doontaa waqti badan waxayna u baahan doontaa dadaal jidheed.
Doorasho kale ayaa ah inaad iibsato baraf barafeed gaar ah, haddii la heli karo. Laakiin haddii qorshayaashu aysan ahayn iibsasho aad u sarreeya, markaa barafka, ayaa lagu sameeyay gacmihiisa isaga oo adeegsanaya qalab casri ah, taas oo laga yaabo inay ku dhejiso garaash kasta, way ku caawin kartaa. Sida loo sameeyo tan, waxaana lagu falanqeyn doonaa qodobkan.
Ma taqaanaa? Mashiinnada barafka ee ugu horreeya ayaa lagu soo bandhigay Kanada. Markii ugu horeysay ee mashiinka noocan oo kale ah waxaa loo dhaariyay Robert Harris, oo deggan magaalada Dalhousie (New Brunswick) sanadkii 1870. Harris wuxuu ugu yeeray baabuurkiisa "Tareenka jidka tareenka ee jidka tareenka" wuxuu u adeegsaday inuu nadiifiyo barafka jidka tareenka.
Snow Blower Blower - waa maxay
Si aad si haboon u sameysid baraf baraf leh gacmahaaga, waa lagama maarmaan, marka hore, si aad u fahamtid naqshadeynta qaababka ugu muhiimsan. Dhar kasta oo baraf ah wuxuu ka kooban yahay hal shay oo shaqeed - Auger, kaas oo ku yaal gudaha gudaha jirka ah ee welded. Qaadida waa ul (miir), iyada oo ay weheliso xajmiga dheer ee kaas oo ay jirto dusha sare ee dusha sare leh. Mashiinka wuxuu ku wareegayaa rikoodhada, sidaas darteedna wuxuu lafdhabar u yahay profile.
Mabda'a shaqada ee blower blower
Qaabka nadiifinta barafka, makiinadaha barafka ayaa loo qaybiyaa hal-mar (bareeb) iyo laba marxaladood (rinji).
Sidee buu u shaqeeyaa mashiinka hal-abuurka ah
Mabda'a loo shaqeynayo hal-mar ama wiig baraf ah ayaa ah in rikoodhka, jiidashada iyo tuuridda barafku uu ku yimaado oo kaliya sababtoo ah wareegga auger. Oo waxaa jira gees wejiga keruubka oo wata jajabkii miisaanka. beeritaanka - daboolka barafka oo adag, oo baraf ah.
Mashiinka mashiinka, sida caadiga ah, way ka fudud yihiin jajabiyayaal jajaban, waxaanay noqon karaan oo kaliya kuwa aan is dulqaadan karin. Kuwani waa shayaalka loo yaqaan "wheels" ee loo baahan yahay in hore loo riixo, taas oo ah sababta ay u ruxaan barafka una tuuraan dhinaca. Goobta barafka waxaa lagu wadaa koronto ama farsamo gaas ah (laba-madax-dhiigfuran ama afar-istaag). Mashiinnadani way fiicanyihiin sababtoo ah way fududahay in la shaqeeyo, la is qabsado oo jaban.
Mabda'a mashiinka labada-marba ah
Labada marxaladood, ama koronto-dhajis, baraf barafku wuxuu leeyahay qaab waxoogaa ka duwan. Marxaladda ugu horeysa ee naqshadeynta waxay bixisaa barafka si loogu rakibo auger; marxaladda labaad - ciribtirka adoo adeegsanaya foorarsiga waxaa lagu sameeyaa adigoo isticmaalaya rotor gaar ah - dheecaan supeel.
Ku xeeldheer mashaariicda noocyada barafka rotor-ka ah waxaa loo habeeyaa mabda 'caadiga ah ee mashiinka wax lagu xirto, oo leh meel siman ama jeexan. Qodobbadu waxay noqon kartaa bir bir ah ama caag ah, caag-caag ah, dhejin xoog leh, taas oo ku xidhan haddii baraf baraf ah ama is-rogid.
Qalabka barafka ee mashiinka barafka ee laba-marba wuxuu ka kooban yahay seddex illaa lix jibbaar waxaana sidoo kale laga dhigi karaa qalab kala duwan, iyadoo ku xiran xoojinta shaqada uu qabanayo. Tani waxay noqon kartaa mid caag ah (moodooyinka fudud) ama biraha (oo ah goob shaqo oo ballaaran).
Barafka barafka DIY - halka laga bilaabayo
Si aad u sameysid self-production of rinjiga barafka leh gacmahaaga, waa inaad marka hore go'aamisaa nooca qalabka, ku saleysan baahiyo gaar ah. Waxaad dhisi kartaa hal-mar iyo laba-marxaladood. Haddii aad ku nooshahay meelo baraf xoog leh ay tahay dhacdo naadir ah, ka dibna mashiinka mishiinka ayaa ku filan. Wixii kuwa ku nool gobolka oo aad u daran, "jiilaalka" samaynta, waxaad u baahan doontaa laba marxaladood oo baraf ah.
Xulashada gaas: koronto ama gaas
Marka la eego nooca barafka mashiinka waa koronto iyo gaas. Mashiinnada korontada ku shaqeeya waxaa loogu talagalay shaqada laga helo agagaarka guriga iyo goobaha. Noocyada barafka korontada ee korontada ah ee ay dhaqaale ahaan u isticmaalaan, laakiin wax yar maaha. Makiinadaha shidaalka ee mashiinnada barafka ayaa loo tixgeliyaa qaabab badan, hase yeeshee, kharashkooda iyo dayactirka qiimaha, siday u kala horreeyaan, way sarreeyaan. Sidaa daraadeed, doorashada ayaa mar kale ku xirnaan doonta xaddiga khaaska ah ee hawlaha barafka looga baahan yahay inay qabtaan.
Waa muhiim! Haddii aad dooratid ikhtiyaarka korontada korontada ee korontada, markaa waxaa haboon in la tixgeliyo in cabirka korontada ee caadiga ah ee heerkulka hawada subaxo uu hoos u dhaco oo lumiyo lafdhabarta. Sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa inaad isticmaasho xadhkaha nooca PGVKV, KG-HL, SiHF-J ama SiHF-O.
Ku rakib qalabka korontada ama isticmaal fiilada
Marxaladda xulashada mashiinka waa la baddali karaa haddii aad go'aansatay inaad u sameyso baraf baraf ah oo ku taalla mashiinka maskaxda: unugta lafteeda ayaa fulin doonta doorka.
Haddii gaariga uu la jiro gaasta baaskiil, waa inaad isticmaashaa mishiinka gudaha ee gudaha kaas oo laga soo saari karo mishiinka hore ama qashinka cawska. Awoodda shaqada ee 6.5 l / s ayaa ku filan. Naqshadeynta waxay ku siineysaa rakibidda mishiinka si sahlan loo sii daayo, si loo fududeeyo dayactirka iyo dayactirka, haddii loo baahdo. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la sameeyo bilawga buugaagta ee mashiinka, tan iyo markii la rakibo koronto-dhaliyaha iyo batteriga, culeyska mashiinku wuxuu kordhin doonaa si weyn, taas oo ka dhigi doonta wax yar oo sahlan oo ay ku adagtahay in la wado.
Waxaad dhisi kartaa baraf barafeeyaha korontada korantada. Xaaladdan oo kale, waxaa habboon in la xusuusto in doorashadani ay si weyn u xadideyso raadiyaha mashiinka. Intaa waxaa dheer, mishiinnada korontadu waxay ka cabsanayaan qoyaan, sidaas darteed waa lagama maarmaan inay ku rakibaan biyaha tayada sare leh.
Sida loo sameeyo baraf baraf ah gacmahaaga
Roodhadhka barafka wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha soo socda: muraayad jajab ah (xakamaynta kontoroolka ayaa ku xiran), mishiin, mashiinka shidaalka (haddii baabuurtu ku qalabeysey mishiinka gudaha), baaldi baraf ah ama baaldi leh hagayaal (baaskiil) iyo tuubooyin baraf ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la bixiyo in mustaqbalka snowplow uu ku salaysan yahay sahlan oo awood leh isla waqti isku mid ah.
Sida loo sameeyo baraf baraf baraf ah
Xilliga qaboobaha, socodka waxaa loo isticmaali karaa barafka. Habka ugu fudud ee la isku dhajin karo waxaa lagu dhajiyaa baraf baraf ah. Si kastaba ha ahaatee, xirfadlayaasha xirfadlayaasha ah waxay ku talinayaan inaysan kharashka badan ku bixin santuuqa warshadeynta, laakiin si ay u soo ururiyaan baraf-dhaadheer si loogu isticmaalo qalabka gacmahaaga ee alaabooyinka iyo qaybaha dayactirka. Waxaa jira saddex ikhtiyaar oo loogu talagalay xayawaanka nadiifinta barafka si ay u socoto socodka gadaashiisa.
Doorashada koowaad waa Kuwani waa burushyo soo jiidan oo adagkuwaas oo si fiican ugu habboon barafka cusub, iyo sidoo kale goobaha ay jirto suurtagalnimada in ay waxyeelo u geysato qurxinta goobaha. Burushyada noocan oo kale ah waxay kuxiranyihiin hoosteeda wareega wareega; xajmiga xajmigoodu wuxuu gaaraa 1 m. Waxaad sidoo kale isku hagaajin kartaa xagasha saddexda jihooyin: horay, bidix, sax.
Qaybta labaad ee barafka barafka loogu talagalay motoblock - Tani waa majarafad jajab ah oo mindiyo lehku habboon barafka hore. Hawlgab noocan oo kale ah wuxuu ku xiran yahay qalabka xakamaynta ee leh calaamad guud. Qeybta moobiilka waxaa lagu daboolay caag ah si looga fogaado waxyeellada dusha sare iyo majarafadeeda. Barafka noocan oo kale ah wuxuu ku shaqeeyaa mabda'a 'bulldozer mini': wuxuu lakabiyaa lakab ah baraf, wuxuu qabtaa oo wuxuu u guuraa meesha qashin-qubka. Baaxadda xajinta ee waqti xitaa waxay gaartay 1 m.
Si kastaba ha noqotee, hannaanka gaaban ee wax ku oolka ah ee barafka ah ee loogu talagalay socodka gadaashiisa barafka wareega. Qodobbada ugu muhiimsan ee naqshadda buuggani waa ciriiri caadi ah oo leh muraayad jilicsan. Dhexdhexaadinta, waxay qabataa barafka, taas oo kor u kaceysa iyada oo la adeegsanayo maraakiibta. Ka gudubka marin gaar ah, baraf ayaa laga tuuraa meel ka baxsan goobta. Tani waa nooca ugu wax ku oolka ah ee heesaha, adiga oo kuu oggolaanaya inaad qabsato tiro baraf ah ilaa 25 cm qaro weyn.
Hadda waxaan eegeynaa talooyin tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida loo sameeyo cirridka barafka leh ee ku xiran nooca ciriiriga ah ee gacmahaaga. Naqshadeynta waa kiis biraha ah oo leh mashiinka wiishka ee gudaha. Waxaad isticmaali kartaa naqshad dhamaystiran ama aad adigu sameysid.
Sidaa daraadeed, si aad u leexiso mashiinka dabiiciga ah, isticmaal jaantusyada No. 203. Guryaha loogu talagalay auger waxaa laga sameeyaa aluminium waxaana lagu rakibay dhinacyada barafka guntooda, kuwaas oo ah in la adkeeyo lowska. Daboolka oo uu rotor-ka ujoogo waxaa laga sameyn karaa kuleyliyaha aluminium ee 20 litir: waa in lagu dhejiyaa derbiga hore ee kiiska iyada oo la jarayo baaldi 4 mm.
Dareeraha loogu talagalay barafka waxaa lagu riixaa nidaamka adegyada iyada oo la adeegsanayo mishiinka korontada gadaal ee korantada. Haddii mishiinka blower blower la iibsaday foomka dhameystiran, ka dibna qalabka noocan oo kale waxaa lagu daray. Haddii faleebada gacanta laga dhigo, waa inaad ku iibsataa intaas oo dheeraad ah.
Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad samayso farsamo torkeed, oo laga soo wareejin doono motoblock ilaa barafka. Suunka A-100 iyo riixida loogu talagalay waxay ku haboontahay tan. Sidaa darteed, iyada oo loo marayo isku xirka V-suunka, tikidhka ayaa laga gudbaa mishiinka ilaa mishiinka qulqulka leh ee ku xiran madaxa madaxa barafka.
Waa muhiim! Roodhadu waxay u baahan yihiin inay doortaan oo kaliya xiran yihiin, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro barafka iyaga oo ku jira.
Ka-shaqeeye baraf baraf ah: sameynta auger iyo frame
Haatan waxan ka fekereynaa sida loo sameeyo muraayad, qaab, iyo waliba qalab dheeraad ah oo loogu baahan yahay barafka, isaga oo gacmihiisa ku soo ururay.
Sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad cunto kariso:
biraha wax lagu duubo ama sanduuqa birta ee wax soo saarida vidiyaha iyo jidhkiisa;
xagasha birta ah 50x50 mm ee qaab-dhismeedka - 2 pcs;
tufaaxa 10 mm dhererka qaybaha dhinacyada;
tuubooyin biraha ah oo ah baraf baraf ah (0,5 dhexroor inch);
¾ injogta dareeraha loogu talagalay mashiinka auger.
Wixii soo saaris ah ee tuubooyin jarjaran tuubada naqshadda. Tani waxay lagama maarmaan tahay in lagu xakameeyo gawaarida birta ah 120 ilaa 270 mm, taas oo loo baahan yahay barafka. Sidoo kale, tuubada, marka lagu daro majarafad, waa in lagu qalabeeyaa afar sidbaar oo ah xargaha, oo leh dhexroor oo ah 28 cm, oo laga jaray saldhigga xargaha oo leh jajab koronto.
Maaddaama auger uu u rogi doono xarumaha isdhexgalka ee No. 205, waxay sidoo kale u baahan yihiin in la geliyo tubada. Qeyb ka mid ah tuubooyin caag ah oo dhexdhexaad ah oo ah 160 mm, kaas oo lagu taagay tuubo ka mid ah dhexroorka isla markaana toos loogu dhejiyay jirka auger, waxay noqon doontaa mid ku haboon barafka tuurista.
Si aad u sameyso xargaha barafka, waxaad u baahan tahay:
laga gooyey 4 diyaargarow bir ah;
Dareemku waa kala gooyay kala badh oo leexsho midba midka kale;
ku xir wiqlaha ku jira biibiilaha afar maqlaha ah, hal dhinac iyo dhinaca kale;
on cidhifyada dhuunta xirmo.
Qaab ka mid ah barafka ayaa laga sameyn karaa tuubooyinka birta ah 50x50 mm adoo wada xiraya. Mashruuc loogu talagalay mishiinka waxaa lagu dhajin doonaa qaabkan. Laga soo bilaabo hoose ee xayndaabta barafka waa lagama maarmaan in la qabsado salka, saldhigga oo ah baararka qoryaha. Rugahaas waa in lagu qalabeeyaa lakabyo caag ah, kuwaas oo laga sameeyay sanduuqa ka soo wareega.
Mashiinku wuxuu diyaar u yahay hawlgalka.
Talooyin ku saabsan samaynta baraf barafka ayaa sameeya adiga
Si aad u sameyso barafka isku-dhafan si aad ugu adeegto kaaliye guri oo kalsooni leh intii suurtagal ah, waxaad u baahan tahay inaad raacdo talooyinka qaar:
Ma noqon doonto mid aad u macquul ah in lagu daro xidhmooyinka gaarka ah ee amniga ama daaqadaha si ay u naqshadeeyaan mashiinka si looga fogaado jajabka barafka ama dhagaxyada gawaarida lagu galo;
dooro tayo sarre leh, maadaama ay kaalin muhiim ah ka ciyaaraan duruufaha barafka;
markaad dooratid darawal, waxaad doorbideysaa suunka halkii aad ku adag tahay, sababtoo ah waxaa jira fursado si joogto ah u dhaqdhaqaajin kara qaybaha haddii ay dhagax ama baraf ku dhuftaan;
barafka laga soo bilaabo motoblock waxay u baahan tahay kaydinta kulul ee xilliga jiilaalka. Tani waxay tirtiraysaa baahida loo qabo in la isticmaalo wakhtiga kululaynta hawada;
Xilliga jiilaalku waxay u isticmaalaan dheecaan badan, maaddaama heerkulka hooseeyo ay ku xiran tahay in si dhaqso ah loo dhejiyo.